Ogo, Advanced n'akuku isi, Face nkpuchi igwe, Anọ axis machining, CNC kọmputa gong nhazi, Gantry igwe, Manufacturers, Mere na China - Dongguan Tuoyuan nkenke Machinery Co. LTD.
Gantry igwe isi
CNC machining center n'akụkụ-egwe ọka isi
Universal angular isi
Iri itoolu ogo Angle isi
TUOYUAN etinyewo onwe anyị dị ka ihe kachasị mma nke akụkụ igwe CNC mere na China. TUOYUAN enye efu nkwarụ CNC machining akụkụ site ọgwụgwụ ọnụ nnyocha nhazi. Ngwaahịa anyị dị nha na nkọwa dị iche iche maka igbo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa anyị. Anyị na-atụ anya ịbụ ezigbo akụkụ akụkụ igwe gị nke emere na China.